5-0 Ayaanu Ku Garaacaynaa Tottenham – Jamaahiirta Manchester United Oo Farxad La Dhacay Kaddib Tababarkii Kooxdooda Ee Dubai – Cadalool.com
5-0 Ayaanu Ku Garaacaynaa Tottenham – Jamaahiirta Manchester United Oo Farxad La Dhacay Kaddib Tababarkii Kooxdooda Ee Dubai
Manchester United ayaa soo afjaraysa safarkii ay ku joogtay Magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta oo ay ku sugnayd saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey, isla markaana ay ku qaadanaysay tababar.
United ayaa markii ay kasoo guuleysatay Reading horraantii toddobaadkan waxay u soo duushay magaalada Dubai, waxaana ay ku qaadatay tababar jewiga diirran ee ka jira dalkan qaaradda Asia, waxaana kooxda kula midoobay Paul Pogba oo ka maqnaa kulankii FA Cup iyo Sanchez oo isagana dhaawac kasoo gaadhay ciyaartaas.
Tababare Ole Gunnar Solkjaer ayaa war farxad leh la wadaagay taageereyaasha kooxdiisa, waxaanu sheegay in xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba uu caafimaad qabo, taamna u yahay inuu safto kulanka Tottenham, isaga oo kasoo kabtay dhaawac uu u geystay Jonjo Shelvey oo khadka dhexe uga ciyaara Newcastle.
Pogba oo noqday hoggaamiyaha kooxda, afar goolna u dhaliyey, saddex kalena caawiyey tan iyo bixistii Jose Mourinho ayaa warkiisu uu farxad geliyey taageereyaasha, waxaana markii ay warkan maqleen ay si weyn ugaga fal celiyeen barta Twitterka iyagoo ku dooday inay garaaci doonaan Tottenham mar haddii uu usoo laabtay Pogba.
“5-0 ayaanu ku badinaynaa” Sidaas waxa barta Twitterka kusoo qoray taageere isticmaala magaca Mxrtixl, waxaana ku waafaqay Ben oo soo qoray: “Saddexda dhibcood anagaa leh.”
Halkan ka akhriso falcelintii jamaahiirta United ee soo laabashada Pogba ka hor kulanka muhiimka ah ee Axadda:
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tijaabadii ugu horreysay ee tababare Solkjaer, maadaama kulamadii hore uu la ciyaaray kooxo yaryar, waxaana guul uu ka keenaa ay sare ugu soo qaadi doontaa kaalinta shanaad ee uu hiigsanayo ee Arsenal ay ka haysato.